vendredi, 18 septembre 2020 12:03
Lopary – Vangaindrano: Mamboly hazo ny Fokonolona hiarovana ny tany tsy ho lasan'olom-bitsy
Fokonolona ao anatin'ny Fokontany miisa telo ao amin'ny Kaominina ambanivohitra Lopary, Distrikan'i Vangaindrano no mivondrona ao anaty fikambanana Soa Miaradia. Natao mba hiarovana ny tombontsoa iombonana. Miroso amin'ny fambolen-kazo izy ireo handrakotra ala an'ireo tanim-pokonolona. Fandraisana anjara amin'ny fandrakofana ala hikajiana ny tontolo iainana sady fanatanterahana ny voarakitra ao amin'ny drafitra fampandrosoana ny tanàna ny tsy maintsy hananan'ny Fokontany tsirairay avy tanim-pambolen-kazo.
jeudi, 17 septembre 2020 22:03
Bebandro Ambalanirana: Kilan'ny afo ny sekoly noho ny doro tanety tsy voafehy
May kila hotohoton’ny afo ny Ecole Communautaire Bebandro ao amin'ny Kaominina Ambalanirana, Distrika Tsiroanomandidy. May tao avokoa ireo fitaovan-tsekoly sy entana enti-mampianatra toy ny boky sy kahie ary koa ny dabilio sy ny latabatra. Ny alin’ny talata 15 septambra 2020 no niseho ny loza, ary doro tanety tsy voafehy no voalaza fa nahatonga ny fahavoazana. Misy kilasy T1 ka hatramin'ny T4 ity Sekoly ity, ary mahatratra 150 ireo Mpianatra ao.
jeudi, 17 septembre 2020 21:14
Fiarovana ny sosona ôzôna 2020 : Manohana an’i Madagasikara ny Firenena Mikambana
Manohana an’i Madagasikara amin’ny fanafoanana tsikelikely ny entona manimba ny sosona ôzôna ny Firenena Mikambana amin’ny alalan’ny ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel). Lanonana roa sosona no nankalazaina ny faha-16 Septambra 2020 tao amin’ny CNEAGR Nanisana, ka ny voalohany dia ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny sosona anabakabaka ôzôna, ary ny faharoa kosa dia fanolorana ireo fitaovana avy amin’ny ONUDI. « Ôzôna ho an’ny fiainana » io no lohahevitra nosafidin’ny Firenena Mikambana tamin’ity taona 2020 ity hankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fiarovana sosona anabakabaka ôzôna.
mercredi, 16 septembre 2020 22:37
Sary nindramina Facebook
Ambohimiangaly Ambatondrazaka: Namono olona 4 ny kabonen’ny fiangonana Jesosy Mamonjy
Lehilahy efatra no indray namoy ny ainy tao anaty tay sy amany tany Ambohimiangaly Ambatondrazaka androany alarobia 16 septambra sahabo ho tamin’ny 9 ora maraina. Mpirahalahy iray tampoho ny telo. Nokaramaina nihady lavaka WC mirefy 14 metatra tao amin’ny fiangonana Jesosy Mamonjy izy ireo.Efa feno ny toeram-pivoahana teo aloha ka io lavaka vaovao 14 metatra io no vahaolana. Notrobahana mba hifandray ny fanambanin’ny lavaka mba hahafahan’ny maloto mifindra toerana.Miendrika “vases communicants”, araka ny teny vahiny, izany ny lavaka taloha sy ny vaovao. Nisy fitaovana hadino anefa tany anaty lavaka ka niezaka nandeha naka azy io ny mpihady lavaka iray.Efa tafakatra tokony ho 3 metatra teo anefa ny maloto tao ambany.
mercredi, 16 septembre 2020 09:15
Anosibefody – Moramanga: Mpivady nanao taingin-droa moto, naratra tra-doza ny mpitondra, maty ramatoa vadiny
Nitrangana lozam-pifamoivoizana tao Ankarefo Kaominina Anosibefody, Distrika Moramanga, ny alin’ny 13 septambra 2020. Polisy mivady nanao taingin-droa tamin’ny moto no nifatratra tany anaty hantsana raha niala kamiao. Naratra ilay Polisy nitondra ny moto, namoy ny ainy kosa ilay ramatoa vadiny, 51 taona. Avy aty Antananarivo hiazo an’i Moramanga izy mivady ireto no izao tra-doza izao. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 15 septembre 2020 19:31
Antsiranana: Nomen’ny Kaominina fankasitrahana ireo mpianatra mendrika tamin’ny CEPE
Notoloran’ny Kaominina, tamin’ny alalan’ny Ben'ny tananan’ny Kaominina ambonivohitra Antsiranana Djavojozara Jean Luc, fanomezana ireo mpianatra mendrika, nahazo naoty ambony tamin’ny fanadinana CEPE natao ny 1 septambra 2020 teo. Telo mianadahy izy ireo dia i Iantso nahazo salanisa 19,5/20 tamin’ny fanadinana CEPE farany teo, Chrishna 19,3/20 ary Anna 19,3/20. Ho entina hialasasatra any Nosy-Be izy ireo amin'ity faran’ny volana ity.Nahazo vary 8kg avy ihany koa ny ray aman-dren'izy ireo, miampy « bon d’achat » 200 000 Ariary hividianana kojakojam-pianarana. (Jereo Sary Tohiny)
Velaran-tany 500ha no novolena hazo tao amin’ny toeram-pambolen-kazo ao amin’ny tobin’alan’i Manankazo ao Ankazobe tamin’ny 19 janoary 2020. Acacia sy eucalyptus ny ankamaroany. Ny Madagasco no mitantana ity toerana mirefy 8,750 hekitara ity nanomboka ny taona 2000, ary maharitra 50 taona izany.
samedi, 12 septembre 2020 20:05
Marovantaza - Analalava: Mpividy omby naratra notafihin’ny jiolahy
Nisy rangahy iray mpividy omby voatafik'ireo tsy matahotody tao amin’ny Kaominina Marovantaza, Distrika Analalava. Noho ny fiarahamientan'ny vahoaka anefa, avotra ilay rangahy saingy naratra. Nentina haingana tao amin’ny hopitalibe Antsohihy izy. Nahazo fitsaboana sahaza, ary tsy misy atahorana ny ainy. Efa eo ampelatanan'ny mpitandro filaminana ny raharaha.
samedi, 12 septembre 2020 19:43
Tantsahan'i Betafo: Nanao valin-kafatra ho an'ny Minisitry ny fambolena sy ny fiompiana
Nihetsika indray ireo tantsahan'i Betafo io maraina io ho valin-kafatra ho an'ny Minisitry ny fambolena sy ny fiompiana. Nambaran'izy ireo fa tsy vahaolana ny fampidirana omby avy any ivelany ambaran'ny minisitra fa ny fanokafana ny orinasa Triple A izay mahavidy ronono betsaka sy amin'ny vidiny lafo no vahaolana. Taorian'ny fanariana ronono ny sabotsy lasa teo dia nitondra mpandraharaha avy any amin'ny Distrika Ambatolampy ny lehiben'ny Distrika ary nampihaonina tamin'ny tantsaha fa afaka mividy ronona faran'izay betsaka, saingy 1 200 Ariary ny iray litatra, ary amin'ny fahavaratra kosa dia 1 100 Ariary.
samedi, 12 septembre 2020 13:42
Diplaoma sandoka: Ramatoa iray naiditra am-ponja
Ramatoa iray no tra-tehaka manao sy mivarotra diplaoma hosoka amin'ny anaran'ny sekoly ambony tsy miankina iray nosolokiany ary mangalatra ny sonian'ny Talen’io sekoly io. Nametraka fitoriana ilay Talen-tsekoly ny 31 aogositra teo. Nanao fikarohana ny zandary ary tratra ilay ramatoa tompon’antoka tamin’izany, ary voalaza fa niaiky ny helony ilay ramatoa. Efa maro ny diplaoma namboariny sy efa ampiasain'ireo nividy izany. Vitany koa ny nanova ny lisitr'ireo mpianatra navoakan'ny Sekoly teny amin'ny sampan-draharaha misahana ny fitoviana lenta eo anivon'ny Ministeran'ny asam-panjakana.